IINDLEKO ZOKUTHENGISA UKWANDA KWEZIPHUMO ZOMSEBENZI OOMATSHINI
Nge-Epreli 2020, ixabiso lesinyithi lasekhaya ligcinwe malunga ne-3100 yuan / itoni, ngelixa ngoMeyi 2021, ixabiso lekamva lesinyithi liqhubekile nokunyuka malunga ne-6200 yuan / itoni, ukunyuka kwexabiso kuphantse ukuphindeka kabini, kubetha irekhodi elitsha.
Utshintsho lwamaxabiso entsimbi, ibangele a Iziphumo ezinkulu ukuya IsiTshayina icandelo lemveliso, ngokukodwaly, kolu shishino lokwenza izinto uya kusebenzisa intsimbi engaphezulu, ezinje ngemveliso yezothutho, icandelo lezinto zasekhaya, oomatshini bokuvelisa, njl kuba imali exiss tyhala amaxabiso eemveliso , kodwa kwakhona ngenxa ye i I-COVID, ukwanda kotyalo-mali kwiziseko zophuhliso kunye nemiqobo kwezothutho, nazo zonyusa indleko zezinto ezisetyenzisiweyo. Esinye isizathu kukubonelela kunye nemfuno yobudlelwane bentsimbi eChina.
Ngenxa yokunyuka kwexabiso lempahla eluhlaza, indleko zemveliso ziyenyuka nazo. Kuthatha ixesha okoko umthengi ebeka iodolo thenga izinto ezingasetyenziswanga kwaye uqalise ukuvelisa izixhobo. Ngeli xesha, ixabiso lezinto ezingafunekiyo likhula ngokukhawuleza kwaye lingaqikelelwa.Oko kuthetha ukubafter abavelisi bafumana iiodolo, indleko zinyuka ngokukhawuleza ukuya kwinqanaba lokulahleka ngaphambi kokuziswa. Nangona kunjalo, ikhontrakthi inakhoAyinakutshintshwa ngokulula, kungasathethwa ke ngokunyusa amaxabiso. Oku ikhokelela kwi ukuhla kwe imajini yenzala ukwenzela i abenzi izixhobo gqoloNgokwendlela yangoku yokunyuka kwexabiso lentsimbi, ukuba ngabavelisi nyusa ixabiso ngokunjalo, abathengi abanelisekanga,emva koko rhoxisa iiodolo, iziphumo kubavelisi kukuncitshiswa kweeodolo kwaye kude kuqatsele.
Okwangoku, amaxabiso entsimbi kunzima ukunciphisa ukuya kwinqanaba elidlulileyo kwixesha elifutshane, kusekho indawo ukunyuka, kufuneka si zilungiselele kakuhle ukunyuka kwamaxabiso kuzo zonke iintlobo zorhwebo. Okwangoku, sinethemba lokuba abathengi baya kwenza izigqibo ezifanelekileyo zokuthenga. Ukuba kunjalo’Imfuno engqongqo, ukuthenga kwangaphambili kungcono.